आब २०७५/०७६ को नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु लाई सम्पत्ति बिबरण बुझाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ! – Public Health Concern(PHC)
आब २०७५/०७६ को नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु लाई सम्पत्ति बिबरण बुझाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना !
in जनस्वास्थ्य समाचार, जानी राखे राम्रो, राष्ट्रिय, स्वास्थ्यमा अहिले, स्वास्थ्यमा नेपाल सरकारका सूचना तथा जानकारीहरु
Nijamati Kitawab Khana PIS
काठमाडौं : सरकारले सम्पत्ति विवरण बुझाउन सबै निजामती कर्मचारीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। यही साउन १ गते देखि भदौ २८ सम्म कार्यालय समयमा निजामती किताबखाना हरिहर भवन पुल्चोकमा बुझाउन भनिएको छ।
सम्पत्ति विवरण विदामा बसेका कर्मचारी, निलम्बनमा परेका र २०७५/७६ सालमा सेवा निवृत्त भएकाले समेत अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ। सम्पत्ति विवरण हुलाक, कुरियरबाट पनि पठाउन सकिने किताबखानाले जनाएको छ। सम्पत्ति विवरण निजामती किताबखानामा दर्ता भएपछि एसएमएसबाटै थाहा पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
हेर्नुस निजामति कितावखानाको सूचना
Tags: health infoJanaswaasthya SarokarNIjamati KarmachariSampati Bibaran
घातक यौन रोगहरु जस्ले जनस्वास्थ्य समस्या सिर्जना गर्दैछ !